स्टन्ट राइडर गौरव भन्छन् "पहिला स्टन्ट राइडरलाई ट्यापे, झ्यापे तथा फटाहा मानिन्थ्यो - Everest Talk
स्टन्ट राइडर गौरव भन्छन् “पहिला स्टन्ट राइडरलाई ट्यापे, झ्यापे तथा फटाहा मानिन्थ्यो1 min read
कृष्ण ढुङ्गेल by
२०७७, १४ असार आईतवार ११:१३
in एभरेष्ट टक विशेष, खबर, खेलकुद, मुख्य समाचार
पहिले खेलकुदलाई जीवनसँग जोडेर हेरिँदैन थियो । अझ काम त मान्दै मानिँदैन थियो । एक मनोरञ्जनसिवाए खेल अरू केही पनि थिएन । बरु खेल समयको बरबादी थियो, जीवनको क्षती त कहिलेकाहीँ बेगारीको भेला थियो ।
फूटबल खेल्न जानुपरोस् वा पौडी, घरबाट लुकेरै पुग्नुपर्थ्यो । यदि घरमा थाहा भएको खण्डमा धुलाई त छँदैथियो । खेलकुदबाटै पनि जीवनमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विकास कत्ति पनि थिएन त्यो बेला । खेलमा आफ्नो जीवन व्यथित गर्नुभनेको भविष्यमा दुख र अभावलाई निम्त्याउनु नै हुन्थ्यो ।
पहिले खेदकुद सिकाउन भनेर कुनै पनि बच्चालाई खेलकुद एकेडेमीसम्म पुर्याइँदैन थियो । जति सिक्थे, आफैँ सिक्थे । कतिलाई भने त्यही खेलकुदको मोह हुन्थ्यो, नजानेपछि मूर्ख तरिका भए पनि अपनाउनै पर्यो । अपनाउँथे । कोही सफल हुन्थे । कोही जीवनबाटै विफल पनि बन्थे ।
पहिले यस्तै थियो । फुटबल र क्रिकेटबाहेक खास्सै अरू खेललाई त खेल पनि गनिदैन थियो । बडी बिल्डिङ तथा बाइक स्टन्ट जस्ता खेलहरू त त्यो बेला समाजको समज बाहिरको कुरा थियो । सहरी एरियामा बाइक स्टन्टको केही प्रभाव त थियो तर यो खेल नै हो भनेर मान्नेको जमाथ सायदै थिएन ।
समय फेरियो । समयसँगै व्यक्ति र समाज । र, फेरि खेलकुदप्रतिको सोचाई र बुझाई पनि । खेललाई जीवनको नजिक बनाएर हेर्न थालियो । खेलकुदले भविष्य पनि देखाइदिनथाल्यो । अभिभावकहरू आफ्ना बच्चाहरू लिएर फुटबल, क्रिकेटलगायतका एकेडेमी सम्म पुग्न थाले ।
नेपाली खेलकुद यहाँसम्म आइपुग्नुमा केही खेलाडीको योगदान अतुलनिय छ । नामै लिँदा पारस खड्का, हरी खड्का, मिरा राई, वैकुण्ठ मानन्धर, बिमल घर्ति मगर, सन्दीप लामिछाने आदि ।
बाइक स्टन्ट र स्टन्ट राइडर गौरवका कुराः
स्टन्ट के हो भन्नुभन्दा पहिले बच्चालाई बुझ्न जरुरी हुँदोरहेछ । हरेक बच्चाले हरेक कुरा फरक तरिकाले गरिरहेका हुन्छन् । तर सबैको तरिका हामीलाई कलात्मक लाग्छ । चाहे त्यो हिँड्ने होस् वा बोल्ने । हो, स्टन्ट भन्नु नै उही कुरालाई अरूले भन्दा भिन्न र कलात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्नसक्नु हो । जसमा सबैभन्दा अगाडि बच्चाहरू हुँदा रहेछन् ।
अब गरौँ, बाइक स्टन्टको कुरा । बाइक स्टन्टको इतिहास विश्वमै त्यति लामो छैन । अझ नेपालमा लामो हुने कुरा पनि भएन । तर अहिलेका युवा युवतीहरूमा यसको क्रेज अध्याधिक छ । यदि अन्य कुनै मेला वा युवाहरूको जमघट भएको ठाउँमा बाइक स्टन्टलाई राखिदिने हो भने वरिपरिको सबै भीड स्टन्टतिरै खनिने अवस्था छ । यस खालका उदाहरणबाट पनि अहिलेको स्टन्ट क्रेज अनुमान लाउन सकिन्छ ।
काठमाडौँ निवासी गौरव पाठक नेपालका एक अब्बल र दक्ष स्टन्ट राइडर हुन् । विगत १२ वर्षदेखि बाइक स्टन्टलाई आफ्नो प्यासन बनाउँदै आएका उनी अहिलेकै अवस्थामा आफ्नो प्यासनलाई नै प्रोफेसन बनाउने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘स्टन्ट राइडरहरू लाई पहिलेको तुलनामा अहिले सजिलो छ । सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको सहयोग नभए पनि अहिलको अवस्थामा विभिन्न कम्पनीहरूले स्टन्ट राइडरहरूलाई आफ्नो प्रोमोसनको माध्यम बनाएका छन् । माउन्टेण्ड डिउले वर्षमा एउटा टोलीलाई नेपाल टुर गराउँछ । यसरी हेर्दा अहिले स्टन्ट राइडरहरू को लागि प्ल्याटफर्म बन्दै गइरहेको छ र आशावादी हुने ठाउँहरू छन् ।’’
यस खेल जोखिमपूर्ण र सहासिक हो भन्ने कुरामा गौरव पूर्ण सहमत छन् । तर, यदि स्टन्टलाई टेक्निकहरूको ज्ञानसहित अनुशासित भएर गर्ने हो भने उक्त जोखिम नरहने उनको बुझाई छ । अहिलेका युवाहरूले स्टन्टलाई खेलको रुपमा नभएर फेसन र एकअर्काबीचको प्रतिस्पर्धाको रुपमा विकास गरेर लगेको कुरा सत्य हो । अहिलेका ९० प्रतिशत युवतीहरू आफ्नो प्रेमीका रूपमा साहसिक, फेमस र स्टाइलिस केटा चाहन्छन्, तर त्यहाँ प्रेम नभएर आकर्षणमात्र रहन्छ । जसबाट स्टन्ट राइडरहरू बच्न सकेका छैनन् । स्टन्ट राइडरहरू पनि केटीलाई आकर्षित गर्ने र आफूलाई खतरै देखाउने होडमा स्टन्टको गलत प्रयोगमा लागेका छन् । यो गौरवको भोगाइ पनि हो ।
यात्रा र संघर्ष:
कुनै जमाना थियो, स्टन्ट राइडरहरूलाई ट्यापे, खाते, झ्यापे तथा फटाहाको उपनाम दिइन्थ्यो । यतिसम्म कि उनीहरूलाई समाजले समाजिक प्राणीको दर्जामा समेत दर्ज गरेको थिएन । तर अहिले समय फेरियो । फेरिएको समयमा बोल्दै राइडर गौरव भन्छन्, ‘‘अहिले स्टन्ट राइडर हुँ भन्दा हेयको दृष्टिले हेर्दैनन् । नजरिया बदलिएको छ । इज्जत छ । एउटा सो (२ देखि ३ घण्टा) को ३० हजारसम्म कमाई हुन्छ । नेपाल टुरमा मौका मिले घुम्नु त छँदैछ सँगै २ लाखको बराबरीमा कमाई पनि हुन्छ । मैले शुरु गर्दाको तुलनामा अहिले स्टन्ट राइडरहरूलाई ज्यादै सहज छ ।’’
कुनै पनि खेलाडीको मूल्य त्यतिखेर मात्र हुन्छ, जतिखेर खेलाडीले आफ्नो खेलको मूल्यलाई बुझ्नसक्छ । यदि खेलाडी नै आफ्नो खेलप्रति अनुशासित र कर्तव्यनिष्ट छैन भने गैर-खेलाडीहरूले उसको समान्न किन पो गर्ने ? फेरि स्टन्ट राइडिङ संसारभरि नै अवैधानिक छ । यदि कहीँ स्टन्ट देखाउनु परे बकाइदा रूपमा सिडियो तथा स्थानिय प्रहरीबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा अरूलाई देखाउनको लागि स्टन्ट राइडिङ गर्नेहरू को जमात ठूलो छ । जसले गर्दा ज्यानैसम्म जाने गरेको समाचारहरू हाम्रा लागि सामन्य बनिसकेका छन् । यस कुरामा गौरव सहमत छन् । उनका अनुसार स्टन्ट बाटोमा देखाउने कुरो होइन । राजेश हमालले कहिल्यै बाटोमा निक्लिएर नाँच्दै वा मान्छे कुट्दै हिँड्दैनन् । किनकि उनको अभिनयको लागि निश्चित ठाउँ छ । स्टन्ट पनि त्यस्तै नै हो, यसको लागि पनि निश्चित ठाउँ छ । राइडरमा अनुशासन र आफ्नो खेलप्रतिको सम्मान हुन आवश्यक छ । यो कुनै केटाकेटीको खेल हैन ।
स्टन्ट राइडर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा गौरव भन्छन्, ‘‘स्टन्ट गरेको हेर्दा कुनै एक दर्शकमात्र डरायो भने पनि त्यो राइडरको हार हो । जसको स्टन्ट राइडिङमा दर्शक अचम्मित भएर एकोहोरिन्छन् त्यो नै वास्तविक स्टन्ट राइडर हो र राइडको सबैभन्दा ठूलो सफलता पनि त्यही नै हो ।’’
सुरक्षाको दृष्टिले हेर्ने हो भने स्टन्ट राइडरहरूले केही सुरक्षाका कवचहरूको सहायताबिना राइडिङ देखाउनु स्टन्टको धर्मविपरित हुन्छ । यसका लागि सेफ्टी गियर, हेल्मेट, जुत्ता, निप्याड, राइडिङ ज्याकेट आदि अत्यावश्यक रहन्छन् । पहिले नजान्दा धेरै दुर्घटना हुन्थ्यो भने अहिले जानेरै पनि पालन नगर्दा हुनेगर्छ । तर यदि सबै नियमको पालन गर्ने हो भने आफू लड्दै गरेको पनि राइडरलाई लड्नुअघि नै थाहा हुन्छ । जसको कारणले गर्दा आफू त्यसको बारेमा प्रिपिअर हुन सकिन्छ ।
विदेशका कतिपय देशहरूमा स्टन्ट राइडरलाई रकस्टारको दर्जामा हेरिन्छ । नेपालमा पनि फिल्मका गरिने डरलाग्दा र साहसिक सिनहरूमा उनै स्टन्ट राइडरहरूको काम हुन्छ । उक्त स्टार हिरो बन्छ । असली हिरोहरू पर्दापछाडि नै रहन्छन् । गौरवको टीमले द ब्ल्याक डायरी, लुट, पिँजडालगायतका फिल्महरूमा काम पनि गरिसकेको छ ।
‘‘खेल भनेको एउटा लत हो । मेरो लागि बाइक स्टन्ट सबैभन्दा ठूलो लत हो ।’’ राइडर पाठक भन्छन्, ‘‘स्टन्टको लतमा लागेपछि अन्य कुलतहरू सामान्य बन्छन् । यो खेल विज्ञान हो । झ्याप दिमागले स्टन्टको बारेमा सोच्न पनि सकिँदैन् । स्टन्टका लागि शरीरको तन्दुरुस्तीसँगै मस्तिष्कको सक्षमता पनि आवश्यक हुन्छ ।’’
बाइक स्टन्टमा रुचि भएका अथवा स्टन्ट राइडर बन्न चाहने युवाहरूलाई गौरव भन्छन्, ‘‘केटी पट्याउँछु, अरू लाई देखाउँछु वा बाटो तथा टोलछिमेकमा बाइक उडाउँछु भन्ने सोच बोकेर स्टन्ट नसिक्नुहोला । यस खेलमा पहिलो खेलको सम्मान अत्यावश्यक छ । त्यसपछि सिनियरले भनेको मान्नुपर्ने हुन्छ । तपाईँले पारस खड्का बन्न चाहानुहुन्छ भने उसको त्यो स्थानसम्मको यात्रा पनि बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।’’
गौरव स्टन्ट राइडर मात्र नभएर एक युवा उद्यमी पनि हुन् । त्रिपुरेश्वरमा उनको ‘बाइकर्स स्मार्ट नेपाल’ नामक कम्पनी रहेको छ । उनी स्टन्ट राइडिङका प्रशिक्षकसमेत हुन् । उनलाई विभिन्न बाइक कम्पनीबाट कामहरू आउने गर्छन्, उक्त काम उनी आफ्ना जुनियरहरूसँग सेयर गरेर गर्ने गरेको बताउँछन् । जसले गर्दा उनीहरूमा यस खेलप्रतिको राम्रो प्रभाव रहने गौरवको धारणा रहेको छ ।
बाइक स्टन्ट सिक्दाका सुरुवाती दिनहरू सम्झिदै उनी भन्छन्, ‘‘आफूले गर्न चाहेको नहुने । टेक्निकहरू नजानेर लडिने र चोटलाग्ने । चोटलागेपछि रिस उठ्थ्यो । कति पटक छोड्दिऊँझैँ लाग्ने त कहिले बाइक नै हुत्याइदिने गर्थेँ । स्टन्टको यात्राले मेरो शरीरमा अठ्ठाईस् टाँकाहरू छन् ।’’
बाइक स्टन्ट शुरु गर्नुभन्दा पहिले राष्ट्रिय गीत बजाइन्छ । जसले खेलाडी तथा दर्शकको मनमा सकारात्मक भावना पैदा गराउँछ र खेललाई डरमुक्त बनाउँछ भन्ने धारणा गौरव राख्छन् । स्टन्टको अन्तिममा यस खेललाई अन्यत्र प्रयोग नगर्न पनि सुचित गरिने गरिएको छ ।
केही समयमै राइडर गौरव स्टन्टकै लागि चाइना जाँदै छन् । सी.एफ. मोटोले आफ्नो तीसौँ वर्षको अवसरमा मनाउन लागेको ‘मोटो डे’ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै उनी जान लागेका हुन् ।
अन्त्यमा उनी भन्छन्, ‘‘एउटै सपना छ । यदि नेपालमा एउटा स्टन्ट एकेडेमी खोल्नसकेँ भने म पूर्ण हुनेछु । क्रिकेट र फुटबलमा झैँ स्टन्टका लागि पनि अभिभावक आफ्ना नानीबाबुलाई भर्ना गर्न लिएर आएको हेर्ने मन छ ।’’
Tags: बाइक राइडरबाइक स्टन्ट